निशा राई - कान्तिपुर समाचार
निशा राईका लेखहरु :
हिन्दीमा एउटा कथन छ- रिश्ते उन्ही से बनाओ जो निभाने की औकात रखते हो । अर्थात्, सम्बन्ध त्योसँग राख, जो सम्बन्ध निभाउन सक्षम छ ।
महामारीको बखत अङ्ग्रेजी साहित्यकार विलियम शेक्सपियरले प्रसिद्ध वियोगान्त 'किङ्ग लियर' लेखे । सर आईज्याक न्युटनले क्वारेन्टाइनमै रहँदा ग्रयाभिटि पत्ता लगाएर संसारलाई योगदान गरे । म किन केही योगदान नगरुँ ?
'मायालु आर यु वासिङ योर ह्यान्डस?'आइमेसेजमा यो मेसेज पप अप भइरह्यो। दिनभरिमा कम्तीमा ६, ७ चोटी।झण्डै ५ महिनादेखि मेरा अमेरिकन डेनिस श्रीमान् याकप कामको सिलसिलामा कोपेनहेगनमा बस्छन्।